OnePlus Bullets Wireless, headset Bluetooth oo ka socda shirkadda "la gariir" Apple | Wararka IPhone
OnePlus Bullets Wireless, sameecadaha dhagaha ee Bluetooth ee shirkadda leh "burcad" Apple
Shirkadda caanka ah ee Aasiya ayaa shalay soo bandhigtay terminalkeedii ugu dambeeyay: OnePlus 6, koox sii wadda inay ilaaliso naqshad soo jiidasho leh; astaamaha qaar sida in kor loogu qaado darajada sare iyo nidaamka cusboonaysiinta nidaamka hawlgalka ee ka farxiya dadka isticmaala. Sidoo kale, OnePlus 6 ma ahayn oo keliya munaasabadda, laakiin shirkadda ayaa ka yaabisay ka soo qaybgalayaasha dhegaha cusub ee bluetooth, OnePlus Bullet Wireless.
Sameecadaha dhagaha, oo noqon doona la jaan qaada kaaliyaha dalwaddii Google —Google Assistant—, waxay noqon doontaa mid biyaha u adkaysata oo meel iska dhigta isku xirnaanta jireed si diirada loo saaro tikniyoolajiyadda Bluetooth. Sida ay tilmaamtay shirkadda lafteeda, ismaamulka ay na siin doonaan - warqad ahaan - ayaa noqon doona 8 saacadood oo muusig isdaba joog ah.
Hadda bine, maahan headset-ka qaabka ugu fiican ee Airpods, laakiin labada darafba waxay ku xiran yihiin xarig aan ka helno badhamada kala duwan ee koontaroolka -baarta iyo raadadka- iyo sidoo kale dekedda lacag bixinta ee USB-C. The OnePlus Bullets Wireless waxay taageertaa amar degdeg ah: oo kaliya 10 daqiiqo oo lacag bixinta waxaan haysan doonaa 5 saacadood.
Dhanka kale, labada darafba iyo in si ka wanaagsan loogu raro, waxaa la siiyaa birlabyo si daboolku u sameysmo waana ay sahlanaan lahaayeen in la raro oo dhib badan ayaa laga badiyaa. Qiimaha dhagaha dhagaha ee Bluetooth waa 69 euro waxaana la heli doonaa laga bilaabo Juun 5. In kasta oo sidii caadiga ahayd aan ka hadalno dhagaha iyo xirriirka taleefannada casriga ah, go'aanka Apple ee ku aaddan jack 3,5 milimitir giraanta ku soo laabo.
Carl Pei, oo ah aasaasaha OnePlus, ilbiriqsiyo kahor smartphone ku bood masraxa oo dhammee soo bandhigidda Boorsooyinka 'OnePlus Bullets', oo faallo ka bixiyay in jilaaha weyn ee dhacdadu sii wadi doonto jack Qalabka dhegaha ee 3,5mm ayaa lagu daray, xaqiiqo aan tixraacay sanadkii hore. Xilligan Waxaad ka arki kartaa daqiiqada 1:14:00.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » OnePlus Bullets Wireless, sameecadaha dhagaha ee Bluetooth ee shirkadda leh "burcad" Apple
Isbeddelada soo socda ee WhatsApp, marka aad ka baxdo koox WhatsApp ah, ma awoodi doonaan inay mar kale kugu daraan
Dagaalkii u dhexeeyey Apple iyo Samsung si uu u nuqul ka sameeyo naqshadda iPhone-ka ayaa soo noqonaya